ओमानविरुद्ध बनेका नेपालका चार कीर्तिमान | Hamro Khelkud
ओमानविरुद्ध बनेका नेपालका चार कीर्तिमान
त्यसअघि अल अमरेत क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेपाल ४७.४ ओभरमा १ सय ९६ रनमा अल आउट भएको थियो । नेपालका लागि आसिफ शेखले १ सय १२ बलमा ७ चौका र १ छक्का सहित सर्वाधिक ९० रनको योगदान दिए । ओमानसँगको हारमा नेपाल र खेलाडीको नाममा केहि खराब कीर्तिमान बनेका छन् । तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले आफ्नै कीर्तिमान तोड्दै झन् खराब कीर्तिमान बनाएका छन् । ओमान नेपालले बनाएका चार कीर्तिमानहरु यस प्रकार छन् ।
४. नेपालविरुद्ध सर्वाधिक छिटो शतक
जतिन्दर नेपालविरुद्ध ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो शतक प्रहार गर्ने खेलाडी हुन् । समग्रमा आडिआईमा नेपालविरुद्ध शतक प्रहार गर्ने उनी तेस्रो खेलाडी हुन् । मंगलबार राती ओमानलाई सहज जित दिलाउन जतिन्दरले ६० बलमा शतक प्रहार गरेका थिए । यसअघि गतवर्ष ओमानकै अकिब इलायसले नेपालविरुद्ध १ सय २ बलमा शतक प्रहार गरेका थिए । अकिब नेपालविरुद्ध ओडिआईमा शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी हुन् । सोमबार १ सय १३ बलमा अमेरिका विकेटकिपर मोनांक पटेलले नेपालविरुद्ध शतक प्रहार गरेका थिए ।
३. सोमपालको नेपाली ओडिआईकै महँगो ओभर
सोमपाल कामीले पाँचौं ओभरमा ओमानविरुद्ध समान तीन चौका र छक्का सहित कुल ३० रन खर्चेका थिए । जुन नेपाली बलरले ओडिआईमा एकै ओभरमा खर्चेको उच्च रन हो । यसअघि २०१९ मा सोमपलले युएईविरुद्ध तेस्रो ओडिआई खेलमा अन्तिम ओभरमा दुई चौका र दुई छक्का सहित कुल २३ रन खर्चेका थिए । मंगलबार सोमपलले झन खराब कीर्तिमान बनाएका हुन् ।
२. ओपनरको रुपमा आसिफको सर्वाधिक रन
नेपाल पराजित भएपनि ओपनर आसिफ शेखले नेपालबाट ओडिआईमा ओपनरको रुपमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने कीर्तिमान बनाउन पुगेका थिए । यसअघि ओडिआईको एकै खेलमा सर्वाधिक धेरै रन सोमबार कुशल भुर्तेलले अमेरिकाविरुद्ध ८४ रन बनाएका थिए । एकै खेलमा नेपालबाट ओडिआईमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने कीर्तिमान पारसको नाममा छ । पारसले २०१९ मा यूएईविरुद्ध तेस्रो ओडिआई खेलमा १ सय १५ रन बनाएका थिए । ओडिआईमा एकै खेलमा सर्वाधिक धेरै रन बनाउने सूचिमा आसिफ दोस्रो स्थानमा रहँदा रोहित ८६ रनका साथ तेस्रो र कुशल भुर्तेल चौथो स्थानमा छन् ।
१.नेपालको सर्वाधिक खराब पावर प्ले
नेपालले ओमानसँग खेलमा पहिलो पावर प्ले अर्थात सुरुवाती १० ओभरमा १ विकेट लिँदै १ सय ८ रन खर्चेको थियो । यो नेपालले ओडिआईमा खर्चेको हालसम्मकै धेरै रन हो । यसअघि नेपालले २०१८ को एसिया कप छनोट अन्तर्गत युएईविरुद्ध पावर प्लेमा ६४ रन खर्चेको थियो । ओडिआई इतिहासमा एकै खेलमा सर्वाधिक धेरै रन पावर प्लेमा १ सय ३३ रन छ । जुन श्रीलंकाले २००५ मा इंग्ल्यान्डविरुद्ध पाँचौं खेलमा सुरुवाती १० ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई १ सय ३३ रन बनाएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपालले ओमानसँग हार्नुका पाँच कारण